KUYAWENZA umqondo ukusheshe uqale ukulondoloza imali yelobolo ukuze uzinikeze isikhathi esanele sokuthi uhlomule inzuzo, ngokusho koyiFinancial Wellbeing Consultant, e-Alexander Forbes, uHappy Ngale. “Ilobolo isiko lase-Afrika elibandakanya inkokhelo – kungaba imali noma inkomo noma izinkomo – ezivela emndenini walowo osuke engaba umkhwenyana kubazali balowo osuke engaba umakoti ngokomshando wesintu,” kuchaza uNgale.
Imali ijwayele ukusetshenziswa njengemali, futhi umndeni uyavumelana ngesibalo sezinkomo kanye nenani lenkomo ngayinye. Ilobolo liphinde libandakanye nokuphana ngezipho ezisuke ziyizinto okusuke kuvunyelwene ngazo, kunaba uNgale. Ukulobola yisiko elibizayo. Uma ngabe ucabanga indlela yokubeka imali yelobolo yesikhathi esifushane kumele ubheke izinto ezifana nokuthi mungakanani umthamo noma inani lemali noma izinkomo okumele ube nazo, ubungozi obukhona bokulahlekelwa yilokho osuke ukonga kanye nokuthi uzokonga noma uzobeka isikhathi esingakanani.
IMALI ELONDOLOZIWE ENGABANJELWA INTELA
Lolu hlelo lokonga imali ludlisile emalokishini noma ezindaweni zasemakhaya. “Njengelungu lesitokfela, uthola ingxenye yemali engukheshi njengoba inkokhelo ishintshashintsha kumalungu inyanga nenyanga,” kusho uNgale. Kwezinye izitokfela kukhishwa imali inyanga nenyanga kanti le mali ilondolozwa kwi-account yesitokfela. Ekupheleni konyaka ilungu nelungu lesitokfela lithola ingxenye ethile yamali uma sekuhlukaniswa. -